စိတျနာအောငျ မလုပျပါနဲ့ – Shinyoon
စိတျနာအောငျ မလုပျပါနဲ့ …
လူတဈယောကျကို စိတျဆိုးအောငျ စတာနောကျတာက အပွဈမဟုတျပါဘူး ။ ခဈြလို့ကြီစယျတယျဆိုတာ ပြျောဖို့ကောငျးပါတယျ ။ စိတျဆိုးစိတျကောကျတတျတဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျကလဲ ပွနျခြော့လိုကျတဲ့အခါ ပွသှေားတတျတာပဲ ။ ဒါပမေယျ့ မိနျးမတဈယောကျကို စိတျနာအောငျတော့ မလုပျမိစနေဲ့ ။
အမွဲတမျးဖျောရှပွေီး ပွုံးပွတတျတဲ့မိနျးကလေးတဈယောကျ ကြောကျတုံးထကျပိုပွီး အေးစကျသှားတာမြိုးကို မွငျယောငျကွညျ့ဖူးလား ။ တကယျပါ မိနျးကလေးတဈယောကျ စိတျနာသှားတဲ့အခါ သိပျကို ကွောကျဖို့ကောငျးပါတယျ ကိုယျထငျထား တှေးထားခဲ့ဖူးတဲ့ ပွတျသားမှုတှထေကျ ပိုပွီးသာတဲ့ ပွတျသားမှုတှကေို တကယျလကျတှမှေ့ာ ခံနိုငျရညျမရှိဘူးလေ ။
မိနျးကလေးတဈယောကျ စိတျနာသှားတဲ့အခါ …. ဘယျတော့မှ မလှတျခရြကျပါဘူးဆိုတဲ့ လကျတှကေို အပွီးတိုငျ နှုတျဆကျသှားတတျတယျ ။ ဘယျတော့မှ မခှဲသှားပါနဲ့လို့တောငျးပနျခဲ့ဖူးတဲ့သူကို သူ့ဘကျက ဦးအောငျ ခှဲသှားနိုငျခဲ့တယျ ရှငျမရှိလို့မဖွဈပါဘူးလို့ပွောခဲ့ဖူးတဲ့သူကို ရှငျမရှိလို့လဲ ဘာမှ မဖွဈတော့ဘူးဆိုပွီး လဈြလြူရှုသှားနိုငျခဲ့တယျ ….
စိတျနာတယျဆိုတာ …. စိတျဆိုးစိတျကောကျတာနဲ့ မတူဘူး ။ စိတျဆိုးစိတျကောကျတယျဆိုတာ ခြော့စခေငျြတယျဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျလေးတှပေါတယါ ။ ခြော့ရငျ ပွတေယျဆိုတဲ့ အကွောငျးတှေ အနောကျမှာ ပါသေးတယျ ။ စိတျနာတာကတြော့ မတူတော့ဘူး ။ အမွုပျထှကျအောငျ ရှငျးပွနလေို့လဲ အယုံအကွညျမရှိတော့ဘူး နောကျထပျ ယုံကွညျမိရငျ နောကျထပျကိုပဲ နာကငျြရမယျဆိုတဲ့ စိတျကွီးဆှဲသှားတာပေါ့ ။ အကွောငျးပွခကျြတှေ ပေးနတေယျဆိုတဲ့ အသိတဈခုပဲရှိတော့တယျ အရေးတယူနားထောငျ လို့မရတော့ဘူး ။
မိနျးကလေးတဈယောကျက တျောရုံတနျရုံနဲ့ ဈိတျနာခဲပါတယျ ကိုယျသိပျခဈြရတဲ့သူကိုဆို ပိုလို့တောငျ စိတျမနာခငျြသေးတာလေ ။ ဘယျလိုအခွအေနတှေကွေောငျ့ စိတျနာသှားတတျသလဲဆိုရငျ …အမှားတဈခုကို ထပျခါထပျခါလုပျတဲ့အခါ … မျိနျးကလေးတှကေ စိတျနာသှားတတျကွတယျ ။ ဖောကျပွနျခွငျးတှကေို ခှငျ့လှတျသညျးခံခဲ့ပွီးပွီလေ နောကျထပျတော့ မမှားသငျ့တော့ဘူး မဟုတျလား …. ဒါပမေယျ့ ဆကျပွီးလုပျတဲ့သူက လုပျတာပါပဲ ။ ကိုယျ့စတေနာတှေ ကိုယျ့အခဈြတှနေဲ့ မတနျတော့ဘူးလို့တှေးမိတဲ့အခါ မိနျးမတှကေ သူ့အခဈြတှကေို ရပျတနျ့ပဈလိုကျတတျပါတယျ ။
ဒါကို လူတခြို့က မိနျးမတှကေ အပွောငျးအလဲ မွနျတယျလို့ခေါငျးစဉျတှေ တပျခငျြကွသေးတာလေ ..တကယျတော့ ပွောငျးလဲလာမလားဆိုပွီး အခြိနျတှေ အမြားကွီး အကုနျခံခဲ့ပွီးမှ မပွောငျးလဲလာနိုငျတော့လို့စိတျကုနျသှားတာပါ ။ လှယျလှယျလေး စိတျနာခဲ့တာမဟုတျဘူး … အခြိနျတျောတျောကွာ ဖွုနျးတီးခဲ့ပွီးမှ လဈြလြူရှုနိုငျခဲ့တာပါ
စိတ်နာအောင် မလုပ်ပါနဲ့ …
လူတစ်ယောက်ကို စိတ်ဆိုးအောင် စတာနောက်တာက အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး ။ ချစ်လို့ကျီစယ်တယ်ဆိုတာ ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ် ။ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကလဲ ပြန်ချော့လိုက်တဲ့အခါ ပြေသွားတတ်တာပဲ ။ ဒါပေမယ့် မိန်းမတစ်ယောက်ကို စိတ်နာအောင်တော့ မလုပ်မိစေနဲ့ ။
အမြဲတမ်းဖော်ရွေပြီး ပြုံးပြတတ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက် ကျောက်တုံးထက်ပိုပြီး အေးစက်သွားတာမျိုးကို မြင်ယောင်ကြည့်ဖူးလား ။ တကယ်ပါ မိန်းကလေးတစ်ယောက် စိတ်နာသွားတဲ့အခါ သိပ်ကို ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ် ကိုယ်ထင်ထား တွေးထားခဲ့ဖူးတဲ့ ပြတ်သားမှုတွေထက် ပိုပြီးသာတဲ့ ပြတ်သားမှုတွေကို တကယ်လက်တွေ့မှာ ခံနိုင်ရည်မရှိဘူးလေ ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက် စိတ်နာသွားတဲ့အခါ …. ဘယ်တော့မှ မလွှတ်ချရက်ပါဘူးဆိုတဲ့ လက်တွေကို အပြီးတိုင် နှုတ်ဆက်သွားတတ်တယ် ။ ဘယ်တော့မှ မခွဲသွားပါနဲ့လို့တောင်းပန်ခဲ့ဖူးတဲ့သူကို သူ့ဘက်က ဦးအောင် ခွဲသွားနိုင်ခဲ့တယ် ရှင်မရှိလို့မဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောခဲ့ဖူးတဲ့သူကို ရှင်မရှိလို့လဲ ဘာမှ မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီး လျစ်လျူရှုသွားနိုင်ခဲ့တယ် ….
စိတ်နာတယ်ဆိုတာ …. စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာနဲ့ မတူဘူး ။ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တယ်ဆိုတာ ချော့စေချင်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လေးတွေပါတယါ ။ ချော့ရင် ပြေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေ အနောက်မှာ ပါသေးတယ် ။ စိတ်နာတာကျတော့ မတူတော့ဘူး ။ အမြုပ်ထွက်အောင် ရှင်းပြနေလို့လဲ အယုံအကြည်မရှိတော့ဘူး နောက်ထပ် ယုံကြည်မိရင် နောက်ထပ်ကိုပဲ နာကျင်ရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကြီးဆွဲသွားတာပေါ့ ။ အကြောင်းပြချက်တွေ ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ အသိတစ်ခုပဲရှိတော့တယ် အရေးတယူနားထောင် လို့မရတော့ဘူး ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်က တော်ရုံတန်ရုံနဲ့ စ်ိတ်နာခဲပါတယ် ကိုယ်သိပ်ချစ်ရတဲ့သူကိုဆို ပိုလို့တောင် စိတ်မနာချင်သေးတာလေ ။ ဘယ်လိုအခြေအနေတွေကြောင့် စိတ်နာသွားတတ်သလဲဆိုရင် …အမှားတစ်ခုကို ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်တဲ့အခါ … မ်ိန်းကလေးတွေက စိတ်နာသွားတတ်ကြတယ် ။ ဖောက်ပြန်ခြင်းတွေကို ခွင့်လွှတ်သည်းခံခဲ့ပြီးပြီလေ နောက်ထပ်တော့ မမှားသင့်တော့ဘူး မဟုတ်လား …. ဒါပေမယ့် ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့သူက လုပ်တာပါပဲ ။ ကိုယ့်စေတနာတွေ ကိုယ့်အချစ်တွေနဲ့ မတန်တော့ဘူးလို့တွေးမိတဲ့အခါ မိန်းမတွေက သူ့အချစ်တွေကို ရပ်တန့်ပစ်လိုက်တတ်ပါတယ် ။
ဒါကို လူတချို့က မိန်းမတွေက အပြောင်းအလဲ မြန်တယ်လို့ခေါင်းစဉ်တွေ တပ်ချင်ကြသေးတာလေ ..တကယ်တော့ ပြောင်းလဲလာမလားဆိုပြီး အချိန်တွေ အများကြီး အကုန်ခံခဲ့ပြီးမှ မပြောင်းလဲလာနိုင်တော့လို့စိတ်ကုန်သွားတာပါ ။ လွယ်လွယ်လေး စိတ်နာခဲ့တာမဟုတ်ဘူး … အချိန်တော်တော်ကြာ ဖြုန်းတီးခဲ့ပြီးမှ လျစ်လျူရှုနိုင်ခဲ့တာပါ
ကြှနျမကတော့ လကျစားခရြေတာကို မနှဈသကျဘူး
အရာရာ သိမျးထားရလောကျတဲ့အထိ နှလုံးသားက မကယျြဝနျးဘူးလေ